Daw Nwe Nwe Win၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
Daw Nwe Nwe Win
Daw Nwe Nwe Win's Apps
Daw Nwe Nwe Win's Likes
Daw Nwe Nwe Win's ၏မိတ်ဆွေများ
Daw Nwe Nwe Win's Groups
Daw Nwe Nwe Win သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
Daw Nwe Nwe Win၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ
phyuthi သည်Daw Nwe Nwe Winကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'အကျိုးရှိရဲ့လား (ဆရာတော် ဦးဇောတိက)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည်မူကြိုဆရာ's ၏ '" ကိုယ်ပိုင်ခေတ်ကို တည်ဆောက်ပါ "' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'မာနသိပ်မကြီးပါနဲ့။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'ထေရဝါဒ သာသနာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည်လှိုင်ကျော်ထွေး's ၏ 'တရားပွဲအလှူ အတွက် နိုးဆော်အသိပေးခြင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည်thein wai's ၏ 'အ၀ိဇ္ဇာ၏ အဓိပ္ပါယ်။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည် thein wai's၏ 'လွှဲမှားနေသော စိတ်၏ထွက်ပေါက်များ။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည်Thein Naing Ohn's ၏ 'ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားကိုလေ့လာခြင်း (၁)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည်thein wai's ၏ 'လူတိုင်းအတွက် " မိတ်ဆွေကောင်းအင်္ဂါ ခုနှစ်ပါး "' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည် thein wai's၏ 'လက်တွေ့သိရတဲ့ဒုက္ခ။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ကဲ- ခင်မင်မှုဟာ ဒုက္ခကို ယူလာတာပဲ၊ ခင်မင်မှု မရှိဘူးဆိုရင် ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာ မထင်ရှားဘူးလား”။ တဏှာအတွယ်အတာ ရှိနေလို့ရှိရင် ဒုက္ခဖြစ်မှာပဲ ကျေးဇူးပါ"
Daw Nwe Nwe Win သည် thein wai's၏ 'စဉ်းစားပုံချင်း မတူကြ။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည် thein wai's၏ 'အခွင့်ကောင်း။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည် thein wai's၏ 'အယုတ်ညံ့ဆုံးစိတ်ဆိုတာ။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည် လှိုင်ကျော်ထွေး's၏ 'နိဗ္ဗာန်မရောက်ခြင်း အကြောင်း ၃ပါး'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Daw Nwe Nwe Win သည် မူကြိုဆရာ's၏ 'ဆုတောင်းလေးတွေပြောင်းလိုက်ပါ ”'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
11:01pm အချိန်မတ် 29, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:01pm အချိန်မတ် 29, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:01pm အချိန်ဇူလှိုင် 13, 2013, တွင် ၄၄၂ ဇော်ဇော်နိုင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
8:00pm အချိန်မေ 10, 2013, တွင် angel မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
Friends18.com Thank You Scraps
9:24am အချိန်ှဧပြီ 14, 2013, တွင် ashinmunainda မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:23am အချိန်ှဧပြီ 14, 2013, တွင် ashinmunainda မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်ဒကာမကြီး ကောင်းကျီုးလိုရာပြည့်ဝပါစေ ashinmunainda.mm@gmail.com
7:37pm အချိန်မတ် 1, 2013, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းစာအုပ်(ပထမဆင့်) အုပ်ရေ-၁၀၀။ ကုန်ကျငွေ (၅၀၀၀၀)
ကျောင်းစိမ်းဝတ်စုံ တစ်စုံ(၁၀၀၀၀)၊ ၃-စုံ ။ ကုန်ကျငွေ (၃၀၀၀၀)
သင်တန်းတဘက်(၁၀၀)။ ကုန်ကျငွေ (၄၂၀၀၀) လက်ရှိအချိန်ထိ စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေ (၁၂၂၀၀၀) တစ်သိန်း၊၊ နှစ်သောင်း၊ နှစ်ထောင်တိတိ-သုံးစွဲခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်...။ ရငွေ ၂၅၀၀၀၀၊ ကျန်ငွေ (၁၂၇၀၀၀) တစ်သိန်း၊ နှစ်သောင်း၊ ခုနှစ်ထောင်-ဖြစ်ပါသည်..
ထပ်မံသုံးစွဲမည်ကိုလည်း ထပ်မံ၍ ရှင်းတမ်းထုတ်ပြန်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်...။
နတ်, လူ-သာဓု ခေါ်စေသော်..............
11:49pm အချိန်ဖေဖော်ဝါရီ 5, 2013, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဒကာမရေ... 5.2.2013- (အင်္ဂါနေ့)..တွင် တာချီလိတ်ကပို့လိုက်သော ငွေ 50000- ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ လက်ခံရရှိပါတယ်...။
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ....
6:04pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 22, 2013, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
နောက်ဆုံးပို့ရမယ့်ရက်က မတ်လ 1.ရက်နေ့ပါ..
5:49pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 22, 2013, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဖုန်း.... 09. 421122768
.......မရမ်းကုန်း ရိုးမဘဏ်...ကိုလွှဲလိုက်ရင် ရပါတယ်..
ဒကာမ..စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ပြည့်စုံပါစေ.....
4. မိသားစု တစ်စုလုံး ငြိမ်းအေးလိုလျှင်။
5. တစ်ယောက်တည်းငြိမ်းချမ်းအောင်နေနည်း။(ယောဆရာတော်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဟောကြား)
6. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် ဓမ္မဒဿီမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
7. ဗုဒ္ဓဟောကြားသော မိတ်ဆွေကောင်းများ။
8. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် သုဇာတမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
9. ဘ၀ကိုကျော်ဖြတ်တဲ့အခါ မိမိကိုယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ
10. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် အတ္ထဒဿီမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
12. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် ပိယဒဿီမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
13. ၀ိသာခါရသောဆု (၈)ပါး။
14. နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ မြေအမျိုးအစား။
17. ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ၏ ဘ၀လှအောင်ပြင်ချင်စိတ်။
18. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် တိဿမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း